‘बस है’ भन्दै मुस्कुराउँदै काममा निस्किएका श्रीमानको आयो यस्तो खबर, श्रीमती र बच्चाको भयो बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/‘बस है’ भन्दै मुस्कुराउँदै काममा निस्किएका श्रीमानको आयो यस्तो खबर, श्रीमती र बच्चाको भयो बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस्)
संधै ‘गएँ हैं’ भन्दै हिड्नुहुन्थ्यो, त्यो दिन कोठाको छेउमा पुगेर फेरी फर्किएर आएर बस है म गएँ भन्दै मन नलागी नलागी निस्किएको जस्तो गर्नुभयो, उनले भनिन्, हामी यहाँ कोठा सरेको २२ दिन मात्र भएको थियो ।
अनि अहिले सम्म फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भन्छ । काम गर्ने स्थानमा ठेकेदारलाई फोन गर्दा काम गर्ने स्थानवाट दिउसो ३ वजे नै निस्किएको ठेकेदारले बताए । उनले आफ्ना ठेकेदारसंग मोटरसाइकल बेच्ने कुरा गरेको आफुले सुनेको पनि बताएकी छन ।
अब देखि त्यसरी राती सम्म फोनमा त्यसरी कुरा नगर्नु भनेर सम्झाएको बताएकी छन् । ति महिला तपाईको जिवनमा त्यती धेरै महत्व राख्छिन् भन् म छोरा लिएर जान्छु भनेर भन्दा म अब त्यो महिलासंग बोल्दिन एक पटकलाई माफ गरिदे भनेर भनेक थिए ।
अहिले आफ्नो श्रीमान हराएपछि जाउलाखेल प्रहरीमा उजुरी दिएको भएपनि अहिले सम्म खबर नपाएको बताएकी छन् । सानो छोरासंग उनको बिचल्ली भएको छ ।
भर्खरै हेर्नुहोस्, एक्कासी प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो सन्देश ! अब के होला ? (हेर्नुहोस भिडियो)